Kudzora kwekuzvarwa kwemurume: Ikozvino sarudzo uye mabudiro matsva - Dzidzo Yehutano | Chikunguru 2021
Checkout Dzidzo Yehutano Nhau, Wellness Hutano Dzidzo, Nhau Nharaunda Hutano Dzidzo, Hutano Kambani, Iyo Checkout Zvipfuwo Nhau Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Kambani, Info Info Kambani, Hutano Dzidzo Zvinodhaka Info Info Info, Nhau Nharaunda, Wellness
Kuru >> Dzidzo Yehutano >> Kudzora kwekuzvarwa kwemurume: Ikozvino sarudzo uye mabudiro matsva
Kudzora kwekuzvarwa kwemurume: Ikozvino sarudzo uye mabudiro matsva
Kuwanikwa kwesarudzo dzekudzivirira kubata pamuviri kwave chinhu chakanakisa kuvanhu kana zvasvika pakuronga mhuri uye kudzivirira kubata nhumbu kusingatarisirwi . Izvo zviri kutaurwa, rave riri basa revakadzi nekuti pave paine nzira dzinowanikwa zvirinyore kwavari. Nekudaro, kufambira mberi kwechizvino mukubata pamuviri kwevanhurume kwakazviita kuitira kuti paite sarudzo dzakawanda dzekuzvarwa kwevanhurume dziripo uye dziri pedyo.
8 sarudzo dzekuzvarwa kwevanhurume
Kusvikira nguva pfupi yadarika, nzira huru dzekudzivirira nhumbu dzevanhurume dzaisanganisira kubvisa, makondomu, uye vasectomies. Nekudaro, kufambira mberi kutsva kwakaitwa munyika yehurongwa hwekuzvarwa kwevanhurume: Pane zvasarudzo zvitsva zvese zviripo parizvino uye mukuvandudza
Zvakawanda senge iri nyaya yekudzivirira vakadzi, nzira imwe neimwe inouya nezvakanaka nezvayakaipira, zvichienderana nemamiriro ako akasarudzika.
Masarudzo ekudzivirira kuberekwa anowanikwa kuvarume anosanganisira:
Kurega (kana kudhonza kunze)
Piritsi rekudzivirira kubereka
Kudzora kwemurume kupfura
Male kuberekwa kuzvidzora gel
Zvisina kuvhiya vasectomies
Kuwanikwa: Inowanikwa yekutenga pamusoro pekambani
Makondomu anga ari maitiro akakurumbira ekudzivirira kubereka kwevanhurume nekuda kwekugona kwavo kubata nhumbu pamwe nehutachiona hweHIV. Makondomu anonyanya kushanda pane kutora uye anogona kushandiswa muchienderana nemamwe marudzi ekudzivirira kuberekwa (semuenzaniso, nemukadzi mukadzi arikutora piritsi rekudzivirira kubereka).
Kana ikashandiswa nemazvo makondomu anokwanisa kubatsira kubata pamuviri. zvisinei, kune mikana yakawanda yekukanganisa kwevanhu iyo inogona kuvapa isinganyanyi kushanda. Semuenzaniso, kana kondomu ikaiswa zvisizvo, kana iine maburi madiki kana misodzi, imwe urume hunogona kusvika zamu, zvoita kuti fetereza ibvire.
Kana iwe uri kushandisa makondomu senzira yekudzivirira kuberekwa, zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti haana kupera, akachengetwa nemazvo, uye akaiswa zvakanaka.
Kuwanikwa: Inowanikwa kuti ishandiswe
Maererano ne Yakarongwa Mubereki , zvekuita kunze kwekuita bonde risingabatanidzi echinyakare (mboro mukati memukadzi) kupinda. Sechimiro chekudzivirira kubereka, kubuda kunoshanda mukudzivirira urume nezai kuti zviuye pamwechete, izvo zvinodikanwa kuti hurume huitike.
Outercourse inogona kureva zvinhu zvakasiyana kune vanhu vakasiyana, saka mune dzimwe nguva, izvi zvinogona kusanganisira muromo wemumukanwa kana wekumashure. Kunyangwe zviitiko izvi zvikasakonzera kusangana (kunze kwekunge urume hwazopedzisira hwapinda mumukadzi), makondomu anokurudzirwa kudzivirira njovhera.
Kurega kunowanzozivikanwa seThe Pull Out Method. Apa ndipo murume paanoburitsa sikarudzi yake asati abuditsa kudzivirira kuti urume usasvika muzai rechikadzi. Senzira yekudzivirira kuberekwa, haina kunyanyo shanda, sezvo zvingave zvakaoma kwazvo kuita nemazvo pachinowirirana. Iko kune mukana wekuti urume hunogona kusvika muzai, zvichikonzera kubata kuitika.
maitiro ekurapa hutachiona hutachiona kuvanhu vakuru
Kunyangwe iyi nzira isiri inoshanda zvakanyanya, iri kubudirira zvakanyanya mukudzivirira kubata nhumbu pane kushandisa nzira yekudzivirira nayo zvachose.
4. Piritsi rekudzivirira kuberekwa kwemurume
Muna Kurume we2018, pakange paine budiriro kana zvasvika pasarudzo yekuzvarwa yevanhurume mune fomu yepiritsi. Masayendisiti kuNational Institutes of Health uye Eunice Kennedy Shriver Institute of Child Health uye Human Development yakaziviswa kuti ivo vakapedza kwekutanga kuyedzwa kwepiritsi yechirume ine dimethandrolone undecanoate ( DMAU ). Pakati pedzidzo yavo, varume zana vane hutano vakatora dhosi yezuva nezuva yeDMAU, uye mushure memazuva makumi maviri nemasere ekudzivirira kubata pamuviri kwakacherechedzwa. Kudzidza kwavo kwakaratidza kuti mushonga uyu waive unoregererwa nevadzidzi vechirume uye kuti mushure memazuva makumi maviri nemasere, kubereka kwavo kwakadzikira kusvika padanho rekutemerwa.
Mushonga uyu unoshanda nekuderedza iwo mahormone echirume akadai se testosterone uye achitadzisa kuumbwa kwemasero emurume. Dr. Kendra Segura , bhodhi-yakasimbiswa OBGYN inotsanangura kuti Dimethandrolone undecanoate (DMAU) ndeye uyerogen / anabolic steroid / progesterone kamwe-zuva nezuva piritsi rinodzvinyirira FSH neLH zvichikonzera kudzikira mukugadzirwa kwe testosterone nembeu. Anoti izvozvi zviri mumakiriniki ekuedzwa kuti aongorore mhedzisiro yenguva refu pane itsvo, chiropa, libido, [uye] kushushikana.
Zvimwe zvidzidzo zvemakiriniki zviri kuongororawo jekiseni vhezheni yeDMAU . Nekudaro, nekuda kweyakareba nzira yekubvumidzwa kwezvinodhaka neDFA, isu hatigone kuona izvi pamusika kwenguva yakareba.
5. Kudzora kubereka kupfura
Chidzidzo che2016 chakatsigirwa neCONRAD uye neWorld Health Organisation chakatarisa kana musanganiswa wehomoni unounzwa kuvarume kuburikidza nejekiseni waive unoshanda mukudzivirira nhumbu. Nekudaro, chidzidzo chakamiswa kare nekuda kwemhedzisiro yakakomba uye kusagadzikana kwemanzwiro kwakakonzerwa nepfuti.
unogona here kunwa waini uchitora azithromycin
Pfuti yaive neyakareba-inoshanda shanduro dze progestin, norethisterone enanthate (NET-EN), uye iyo androgen, testosterone undecanoate (TU). Vadzidzi vechirume vakapihwa iwo pfuti vhiki nhatu dzese senzira yekudzivirira kubata pamuviri. Mhedzisiro akaratidza kuti nepo majekiseni aigona kushanda mukudzivirira zvachose kugadzirwa kwembeu, mhedzisiro yacho yainge yakanyanya kuti chidzidzo chienderere mberi. Vatori vechikamu vechirume vakasangana neacne, kurwadziwa kunzvimbo yejekiseni, kuwedzera bonde drive, erectile dysfunction, uye kusagadzikana kwemanzwiro.
Mumwedzi ichangopfuura, vaongorori muIndia vapedza kiriniki yekuyedza jekiseni rekuberekwa kwevanhurume rinodaidzwa kuti RISUG (reversible inhibition yehurume pasi pekutungamira). Sekureva kwaDr.Segura, uyu jekiseni wakaita senge gel, unoita kuti urume husashanda. RISUG inoshanda nekubaya jekiseni repolymeri muvan's deferens yemurume kuvhara masero emurume kubva mumuviri. Izvi zvinodzivirira murume, kudzivirira kubata nhumbu. Jekiseni rimwe chete rinogona kushanda kusvika kumakore gumi nematatu uye rinogona kudzoserwa kana zvichidikanwa neimwe jekiseni inoita kunyungudusa gel. RISUG inoratidza kuvimbisa kwakakura kune vanhurume vasingade zvachose, vasectomy yekuvhiya. Iyo miedzo yaisanganisira zvinopfuura mazana matatu evarume zvidzidzo uye yakaburitsa mwero wekubudirira wakakura kupfuura 97% kudzivirira nhumbu. Parizvino iri kumirira mvumo yekushandisa zvinodhaka muIndia.
KuUnited States, Vasalgel, inova nzira yekudzivirira nhumbu inoenderana neRISUG, iri kusimukira. Hazvina kujeka kuti Vasalgel icharova misika yeUS kana miedzo ikabudirira.
6. Girisi yekubata murume
Gel yekudzivirira kubata inonzi Nestorone-Testosterone (NES / T) yanga iri mumabasa kweanopfuura makore gumi uye ine mukana wekuve unoshanda kwazvo hutachiona hwehutongi hwekuzvarwa kwevanhurume. Iyo gel inodzima gonadotropin mahormoni uye inoderedza kugadzirwa kwe testosterone mumayeso. Izvi zvinoshanda kudzikisa huwandu hwembeu, izvo zvinodzivirira kubata pamuviri. Iyo gel, iyo iyo FDA inokurudzira kuisa pabendekete zuva nezuva, yakaratidzirwa kuve inoshanda mukudzvinyirira kugadzirwa kwembeu muna 2012. kudzidza pa 99 varume. Imwe kiriniki kuyedzwa yakatanga muna 2018.
Nekuda kwekuyedzwa kwakasimba kwekuchengetedza uye maitiro ekubvumidzwa ayo anodikanwa neKudya neDrug Administration (FDA), uyu mushonga unogona kunge usingawanikwe nekutengesa kwechinguva. Iyo gel inotarisirwa kupedzisa kiriniki yekuyedza kuita muna 2022, mushure menguva iyoyo sarudzo ichaitwa yekuendesa mushonga uyu muchikamu chikuru cheChikamu chechitatu.
Kuwanika: Inowanikwa senzira yekuvhiya
Imwe yedzinowanzoshandiswa sarudzo dzekuzvarwa kwevanhurume ndeye vasectomy. Vasectomy inosanganisira kuvhiya kuvhiya, iyo inoshanda zvakanyanya, asi inofanirwa kutariswa seinogara zvachose. Vanogona kudzoserwa mune dzimwe nguva, asi kwete mune zvese, uye kunyangwe nekubudirira kudzoserwa, mikana yekuzvitakura inoderera zvichienderana nehurefu hwenguva kubvira vasectomy yakatanga kupera. Ne vasectomy, machubhu anotakura urume kubva mumachende anotemwa nekuvharwa. Izvi zvinoreva kuti murume anoitwa asina kuchena nekuda kwekubata pamuviri. Urume hunogara mumachende — uye kunze kwourume — uye hunopedzisira hwasanganiswa nemuviri.
Vasectomies maitiro akajairika ane njodzi dzakadzika uye anowanzoitwa muhofisi yekumisikidza .. Mhedzisiro inogona kubuda mushure mekuita maitiro inogona kusanganisira kubuda ropa, kuzvimba, uye kupwanya. Zvimwe zvinonetsa zvakanyanya hazviwanzo. Vasectomies anoshanda kwazvo kudzivirira kubata nhumbu, zvisinei, haadziviriri pakurwisa njovhera.
8. Vasina kuvhiya vasectomi
Hutsva hutsva hwakatungamira kune ekuvhiya nzira dzevasectomy. Izvi ndizvo zvazvakaita neasina kuvhiya vasectomy. Zvakawanda sevasectomy yakajairika, iyo vas deferens inodimburwa kudzivirira urume kubva pamachende. Nekudaro, maitiro acho akasiyana pakuti pane kushandisa scalpel kugadzira incision muchiganda, puncture diki inogadzirwa muganda nechishandiso chakakosha. Ichi chishandiso chinobva chatambanudza zvinyoro-nyoro ganda, chichibvumira kuvhurika kusvika kune vas deferens. Izvi zvinoguma nekubuda ropa kushoma, mashoma matambudziko, hapana kudikanwa kwekusona, uye kukurumidza kupora.
Zvinetso zvekutora kudzora kwevanhurume kumusika
Sezvo nechero kurapwa kutsva, kutora fomu nyowani yekudzivirira kubereka kumusika inomiririra dambudziko rakakura. Dambudziko guru rekuita kuti mishonga igamuchirwe kumusika muU.S. inguva nemari yekudyara inodiwa kuitisa makiriniki akaomarara, anodaro Amber Cann, Pharm.D. uye muridzi we Uturu hweVenus . Kubva pane kuwanikwa kwezvinodhaka kusvika padanho rekupedzisira remiyedzo zvinogona kutora makumi maviri emakore nemazana emamiriyoni emadhora. Anowedzera kuti zvinodhaka zvisina musika muhombe zvine nguva yakaoma yekutsvaga.
Sezvakaita chero mushonga mutsva, mhedzisiro yacho inofanirwa kugadziriswa kana ichizonzi yakachengeteka uye inoshanda zvakakwana kuti ishandiswe muhuwandu hwevanhu. Kana zvasvika pakudzora kubereka kwevanhurume, chimwe chipingamupinyi kudikanwa kwechigadzirwa kuti chibudirire senzira dziripo dzekudzivirira kuberekwa (senge sarudzo zhinji dziripo kare dzekudzivirira kubata pamuviri kwevakadzi, kusanganisira mishonga yekudzivirira mahormone nemaIUD).
Icho chinonyanya kukosha chechikadzi chekudzivirira
Kunyangwe paine zvakawanda zvinonakidza zvitsva zvinoitika zvehurume zvekuberekwa mumabasa, kwenguva iyo sarudzo dziripo pamusika dzakaringana. Mune ramangwana, kuve nezvimwe sarudzo zviripo zvekudzivirira kubata kwevanhurume zvinogona kuve nazvo mabhenefiti mazhinji uye kubatsira kusunungura vakadzi kubva pakuva vazhinji vane basa kana zvasvika pakudzivirira kubata pamuviri.
Pasinei nenzira yaunosarudza yekuzvarwa nayo, zvakakosha kuti utaure nemupi wako wezvehutano nezve kugona kwayo uye chero mhedzisiro yaungasangana nayo. Kuti uwane rumwe ruzivo nezvechisarudzo zvekuberekwa kwechirume, tarisa Iyo Ramangwana reKuberekwa kweMurume Kuberekwa .
ndepapi marwadzo andingatore kana ndine nhumbu
mushonga wemusha wemvura munzeve nekuda kwechando
inogona synthroid kutorwa nemamwe meds
hutano mabhenefiti eiri isina kusvibiswa apple cider vhiniga
zvinotora nguva yakareba sei kuti topiramate ibude musystem yako
chii chinonyanya kushomeka kwehutano
unoedza sei kushaya ayodini